Alpha GPC upfu (28319-77-9) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Nootropics powder / Alpha GPC upfu
MUTSVENE unobatanidzwa uye unyanzvi hwekugadzira kubva ku gramu kusvika mukuraira kweAlpha GPC powder (28319-77-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Alpha GPC powder, inozivikanwawo seL-Alpha glycerylphosphorylcholine kana choline alfoscerate, ndeye nootropic yechisikigo inoshanda zvese pachayo uye mukubatana nemamwe ma nootropics. Zviri muropa zviripo mumuviri mune zvidiki uye zvinotengeswa zvinogadzirwa sechinhu chakanatswa che soy lecithin yakacheneswa….
Molecular Kurema: 257.22
Alpha GPC powder mukuwedzera huropi hunoita uye humwe huwandu hwekuwedzera
Iyo iri pakati pe phospholipid metabolism, Raw Alpha GPC poda inoshanda nekukurumidza uye yakavimbika, zvikurukuru nekupa choline inokosha kuuropi.
Alpha GPC powder ine nhengo dzinotyisa zvekunootropic, kusanganisira kukurudzira mamiriro ekudzivirira uye kudzivirirwa pakurwara kwepfungwa. Kunyanya kuongororwa kwemakiriniki anosanganisira zviuru zvevatori vechikamu vakaratidza kuti inobatsira kurapa kukanganisa kukanganisa kukanganisa kwakaenderana nehutano hwakasiyana-siyana, kusanganisira chirwere cheAlzheimer, vasementia vevascular, uye stroke. Iyo inewo neuroprotective anti-aging masimba uye zvidzidzo zvinoratidza kuti inogonawo kubatsira mukurapa kwekuzvidya mwoyo.
Inenge isina-nootropic inobatsirawo, kusanganisira kukwanisa kuwedzera sero membrane utano uye kukurudzira kupora nokukurumidza mushure mekuita. Zvidzidzo zvepakutanga zvinoratidza kuti zvinogonawo kuita se dopaminergic, zvichisimudzira kusunungurwa kwehomoni dopamine, zvinoreva kuti inogona kushanda senzira yekurapa kwemamiriro eurodegenerative zvakadai sechirwere chePasinson uye inogonawo kuva nemafungiro ekuwedzera.
Asi kune vazhinji vashandisi vema nootropic, simba rechokwadi reAlfa GPC powder riri mune zvingangoita zvinhu pazvinotorwa pamwe chete nezvimwe zvinowedzera. Izvo zvinowedzera kuti Raw Alpha GPC powder inoita kuti zviwanike kuuropi inogona kuwedzera kukura kwekunzwisisa kugadzirisa migumisiro yemascetam. Inogonawo kudzivirira zviduku asi zvinoshungurudza misoro iyo ndeimwe yezvikamu zvishoma zvinokonzerwa ne racetam nootropics.
Alpha GPC powder inotungamirirwa muEurope, iyo inorayirwa kurapwa kwechirwere cheAlzheimer uye inotengeswa pasi pezita rezita rokuti Gliatilin uye Delecit. MuUnited States inonzi inowedzera kudya uye inowanikwa pasina mushonga.
Muyero wakaenzana weAlpha-GPC ndeye 300-600 mg, maererano nematarenda anozivikanwa zvikuru. Iyi nhamba inoenderana nekudzidza achishandisa alpha-GPC kuti iwedzere simba rinobudiswa (600 mg) uye zvidzidzo zviviri zvicherechedza kuwedzera kwekukura kwehomoni, uye inogona kunge yakakosha kuti inotora vatambi.
Nekushandiswa kweAlpha-GPC mukudzivirira zviratidzo zvekushaya njere, zvinenge zvese zvidzidzo zvinoshandisa kuyerwa kwe1,200 mg zuva rega rega, zvakakamurwa kuva zvitatu zve 400 mg. Hazvinyatsoziva kuti madhigirii maduku angabatsira sei kugona, asi 1,200 mg inoratidzika kuti inogara ichibatanidzwa nekubatsirwa.
Zvidzidzo zveduzhinji zvinoratidza kuti migumisiro yeAlg-GPC inowanikwa mumuromo inopisa pa 300-600 mg / kg, iyo inofungidzirwa kuti inonzi yevanhu 48-96 mg / kg (uye nokuda kwe150lb munhu, 3,272-6,545 mg zuva nezuva).
Pasinei nokuva chinhu chechisikigo choline chinokonzera, kuwedzera mufomu yakadzika kunogona kukonzera Alpha GPC powder side effects. Imwe yenhengo dzakawanda Alpha GPC powder nemigumisiro inongova musoro kana chirwere, izvo zvinowanzobva kubudisa choline yakawanda muuropi. Vamwe vanhu, vakadai sevakakurumbira "biohacker" Dave Asprey, vanotaura kuti vakakwirira mu choline uye saka vanowana misoro pavanenge vachiwedzera.
Dzimwe mimwe migumisiro yeRaw Alpha GPC powder inosanganisira zvinhu zvakadai sekuvhiringidzika, erythema, nekushaya hope (kubva pakukurudzira). Zvisinei, pasinei nemigumisiro yemigumisiro, kune uchapupu hwokuti ino nootropic inonyatsorambidzwa pamadhora akawanda. I-LD50 (chiyero chinoshandiswa kuwona kuti muyero unouraya 50% yevanhu) inoratidzira chirwere che 10k mg / kg (yakaenzana ne 6800 gramu ye 150 lb munhu) pamakumbo.
Chimwe chidzidzo chinonzwisisika chakaratidza "hapana akacherechedza maitiro akaipa" neyero iyo yakaenzana ne1636 mg mu 150 lb munhu.
Kunyange zvazvo zvinowanzozivikanwa sekusagadzirisa, vamwe vanhu vanorondedzera kukanganisa kunokurudzira neAddingal alpha-GPC.
Zvinogona kuva zvakangwara kutora alpha-GPC pamwe chete nemafuta emafuta acids nokuda kwekudya (nemhaka yekuti iri phospholipid), kunyange zvazvo izvi zvisingaoneki sechikonzero chakakwana.
L-alpha-glycerylphosphorylcholine (yakaderedzwa kuAlfa-GPC kazhinji, inozivikanwawo se'choline alphoscerate kana glycerophosphocholine) inonzi choline ine phospholipid uye iri pakati pe lecithin metabolism kana kungoita lecithin molecule ine mazana maviri emafuta acids.Icho choline pro-drug , uye inozivikanwa kuva mutsva weacetylcholine uye phosphatidylcholine mumuviri mushure mekuwedzera.
Alpha-GPC inowanikwa senzvimbo inowanzoitika yezvigadzirwa zvitsvuku zvenyama uye nhengo dzomuviri asi chikamu chikuru hachidikanwi mumari inokonzerwa mumasikirwo akangoerekana aripo. Zvimwe zvinowedzera zviri neAlpha-GPC zvinogadzirwa zvakagadzirwa, iyo inogona kugadzirwa nemasikirwo kubva mazai kana soy lecithin. Kubva pane iyi synthesis uye iyo inobva, iyo dzimwe nguva inonzi inonzi semisynthetic yakabva lecithin.
Alpha GPC powder inogona kuwedzera nokukurumidza kushandiswa kweacetylcholine uye neurotransmission muuropi, iyo inowanzoitwa 20-30 maminitsi mushure mekushandisa mumuromo. Vashandi vanogona kutarisira kuwedzera kukura kwepfungwa, kuisa pfungwa uye kufunga kwepfungwa munguva ino. Kushandiswa kwakakwana pamwe chete nekudya kwakananga uye hurumende yekuita basa ichawana kushanda kwakakwana nekugadzirisa kushandiswa kwemagetsi eRaw Alpha GPC powder mukati mavhiki ekutanga e2 anoshandiswa.
Nzira yekutenga Alpha GPC powder kubva kuAASraw